Xanuunka ilmaha yaryar iyo kuwa waawaynba | Children's Education Materials
Xanuunka ilmaha yaryar iyo kuwa waawaynba
duritaanka sida xididka daawada laga qaato ama dhiigga l abaarayo
Waxaa kaloo aynu xanuunka ku cabbiri karnaa qalabyo khaas ah. Daryeelahu waxa uu eegi karaa sida illmahu wax u sameynayo ama astaamaha jirka (sida wadno qaraaca, heerka neefsashada, cadaadiska dhiigga) si uu u ogaado in ilmahu xanuun hayo, khaas ahaan ilmaha aadka u yar. Ilmaha yara weyn waxay awoodaan in ay xanuunkooda heerka uu yahay sheegaan ama wejigaooda laga garto heerka ay dareemayaan.
Ilmaha marka uu xanuunka hayo siyaabo kala duwan ayey u dhaqmaan. Eeg astaamaha hoos ku taxan
Ilmaha Ka yar hal sano waxay u dhaqmaan siyaabo kala duwan oo astaan u ah xanuun. Calaamadaha waa ay dhici karaan iyadoon ilmahu xanuun hayn, laakiin isku jirkooda inta badan waa xaadir marka ilmahu xanuun hayo.
caro badan, deggenaansho la’aan
oohin joogto ama saa’id ah
wejiga oo ay kaduudaan
gacmaha oo ay duubtaan
jirkooda oo ay adkeeyaan
cuntada oo ay diidaan
iyagoo seexan waaya
Socod-baradku waxuu sameyn karaa:
Labo ilaa afar sano jirku waxuu sameyn karaa:
Shan sano ilaa todobo iyo toban si toos ah ayay uga hadli karaan sbabta, nooca, iyo caddadka xanuunka. Astaamaha caamka ah waxaa ka mid ah:
Ilmaha dhowr iyo toban jirka waxaa lagu arkaa astaamo carruur iyo dad weyn oo isku jira. U fiirso:
Marka ilmahu xanuun hayo, waxa ay waalidka leeyihiin qeyb muhiim ah. Sababtoo ah adiga ayaa cunuggaaga ugu aqoon badan, waxaad si hoose ula shaqeyn kartaa shaqaalaha (sida dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha, ama shaqaalaha maaweeliya ilmaha) si loo yareeyo xanuunka. Waxaad tahay qofka ugu habboon ee ilmahaaga ka caawini kara xamilaadda marxaladaha cusub ama adag.
Inaad isticmaasho wax kastoo niyad ahaan dejin kara cunuggaaga ka hor iyo ka dibba markii marxalad welwel keeni karta ay jirto.
Xanuunku waa mid saameeya jirka iyo niyaddaba. Ilmahu waa ay dareemaan xanuunka jir ahaan, balse waa ay ka fikiraan niyad ahaan. Waxyaabaha ay dareemaan waxaa ka mid ah dareemid gubasho, wax ku taagan ama majiirid. Waxyaabaha ay ku fikiraan waxaa ka mid ah “Maxuu xanuunkan ii hayaa,” “Muddo intee dhan ayuu I heyn doonaa,” “Muu qof iga qaado xanuunkan,” iyo “Sababta xanuunkan ma xumaan aan sameeyaa?” Waxay is weydiiyaan in xannunku ka sii dari doono iyo inay ka reysan doonaan weligood. Welwelkan ama walaacan waxuu ka dhegi karaa xanuunka mid sii dara, taasoo cunugga inuu sii welwelo keenaysa. Sidee loo joojin karaa meertadan “xanuunwelwel-xanuun”. Waxyaabaha caawiya si loo yareeyo welwelka iyo xanuunka waxaa ka mid ah:
Kareemka kabaabyanta, sida EMLA ama ELA-Max waxaa la saari karo jirka si ay u kabuubiso. Inta badan waxaa la isticmaalaa duridda maqaarka ama xididka ka hor. Waa inay saarnaataa maqaarka ugu yaraan hal saac si ay u kabuubiso. Kama hortagto xanuunka oo dhan, laakiin waxay caawiso yareynta xanuunka. Eeg warqadda barashada “Anesthetic cream” (“Kareemka kabaabyanta”).
Narcotics waa daawwoyin aad u awood leh oo loo isticmaalo daaweynta xanuunka dhexe ilaa kan saa’idka ah, inta badanna la isticmaalo qalliinka ka dib. Waxaa laga siin karaa xididka ama afka. Daawoyinkan waxay keeni karaan dhibaatooyin sida jir cun-cun, lallabo, ama saxarada oo adkaato ama yaraata. Daawoyinka waxay keeni karaan hurdo la’aan iyo neefsasho gaaban. Mararka qaarkood NSAIDs ama Tylenol iyo narcotics ayaa iskun mar la wada isticmaalaa. Marka narcotics-ka afka laga qaato, waa in cunto lala qaataa si looga taxadaro lallabada. Si iyadana looga taxadaro saxarada oo adkaata ama yaraata, waa in ilmahaagu cabbaa cabbitaan badan, ama faleebbo lagu duraa.
Isbitaalka gudihiisa, waxaa jira siyaabo kale oo loo qaato daawooyinka xanuunka. Ilmaha waxay isticmaali karaan tuubo daawo-xanuun oo xukumayo bukaanku Taasoo la riixayo batoon siinaya in go’an oo daawo xanuun ah. (Eeg warqadda barashada “Daawo-xanuunka uu xukumo bukaanku.”) Ilmaha la qalay waxaa la siin karaa tuubo yar oo la geliyo dhabarka u dhow dareemaha laf-dhabarta si daawada toos ay u gaarto dareemayaasha dhammaadkooda. (Eeg warqaddam barashada ee “Daawo xanuunka dareemaha lafdhabarta.”)